ထိပ်တန်း 10 ဆီယက်တဲလ်ဝိုင်ဘား
ယူနိုက်တက်စတိတ် ဝါရှင်တန် ဆီယက်တဲလ်
ဆီယက်တဲလ်ရဲ့ထိပ်တန်း 10 ဝိုင်ဘား
ဆီယက်တဲလ်မြို့သူမြို့သားတစ်လျှောက်လုံးတည်ရှိအများအပြားစပျစ်ရည်ကိုဘားအဖြစ် Woodinville အတွက်အနီးအနားမှာဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကသက်သေအဖြစ်၎င်း၏စပျစ်ရည်ကိုချစ်ကြောင်းတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏စပျစ်ရည်ကိုဦးစားပေးချရှိသည်သို့မဟုတ်ပဲစပျစ်ရည်ကိုအကြောင်းကိုသင်ယူဖို့စတင်နေကြသည်ဖြစ်စေ, ညနေခင်းဖြုန်းနဲ့ဆီယက်တဲလ်ရဲ့ထိပ်တန်းစပျစ်ရည်ကိုဘားထက်တစ်ဖန်ပျော်မွေ့စရာအသေးစိတ်အရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စပျစ်ရည်ကိုအရက်ဆိုင်ကိုမကြာခဏအရသာ pair နဲ့တခါတရံအစားအသောက်အပြည့်အဝ menus တွေတက်ဝတ်ပြုနှင့်အချို့သောပင်မနက်လည်စာအစေခံ!
မပျစ်ရည်ကိုလူတစ်ဦး? မှတဆင့်တစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ ဆီယက်တဲလ်ရဲ့အကောင်းဆုံး microbreweries ။
06 ၏ 01
Sitka နှင့် Spruce
တစ်ဦးအေးမြ upscaling ကော်ဖီဆိုင်ခံစားခြင်းနှင့်တစ်ဦးပွင့်လင်းမီးဖိုချောင်နှင့်အတူ Sitka နှင့် Spruce သင့်ရဲ့ပုံမှန်စပျစ်ရည်ကိုဘားလေထုမရှိပါ။ ဒါဟာဖြစ်စေသင့်ရဲ့ပျမ်းမျှအားစပျစ်ရည်ကိုဘား menu ကိုမရှိပါ။ အဲဒီအစားမီနူးဆီယက်တဲလ်မှာအကောင်းဆုံး scones နှင့်ကော်ဖီအချို့အပါအဝင်နှမွောမနက်လည်စာ, နေ့လည်စာနှင့်ညစာရွေးချယ်မှု, features! Menu ကိုပစ္စည်းများကိုမကြာခဏပြောင်းလဲသွားပေမယ့်အားလုံး, အရသာလတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်မကြာခဏဒေသအလိုက်ရင်းမြစ်ထားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ စပျစ်ရည်ကိုစာရင်းဝါရှင်တန်, အော်ရီဂွန်, ပြင်သစ်, အီတလီ, ပေါ်တူဂီများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအခြားစပျစ်ရည်ကိုတိုင်းဒေသကြီးများအနေဖြင့်ရွေးချယ်မှုပါရှိပါတယ်။
တည်နေရာ: 1531 Melrose ရိပ်သာလမ်း, ဆီယက်တဲလ်
06 ၏ 02
ခရမ်းရောင်Caféနှင့်ဝိုင်ဘားကအနည်းဆုံးသူ့ရဲ့ flagship ဆီယက်တဲလ်တည်နေရာနွေးအရောင်များ, ကျယ်ပြန်နေရာများနှင့်ပတ်ပတ်လည်တွေအကြောင်းတစ်ဦးလှေကားနှင့်အတူစပျစ်ရည်ကိုတစ်ဦးမြင့်မားဆလင်ဒါမှာဖြစ်နိုင်သည်တစ်ဦးတည်း ambiance အဘို့ဆီယက်တဲလ်ရဲ့ထိပ်တန်းစပျစ်ရည်ကိုဘားဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးလေးတည်နေရာပီဇာမှ appetizers ကနေအသားညှပ်ပေါင်မှအရာအားလုံးနှင့်အတူကျယ်ပြန် menus တွေပါရှိပါတယ်, မီးဖုတ်ထားသောတွေဖြစ်တဲ့အပါအဝင်အနည်းငယ်ခြွင်းချက် menu ကိုပစ္စည်းများနှင့်အတူ, ရက်စွဲများနှင့်ကျောက်ပုစွန် mac နှင့်ဒိန်ခဲကျပ်။ စပျစ်ရည်ကိုစာရင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဝိုင် compiles ။ ဖန်ခွက်များကဆိုစပျစ်ရည်ကိုခံစားကြည့်ပါ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသည်စပျစ်ရည်ပျံသန်းသို့မဟုတ်တွဲဖက်မှုကိုရွေးပါ။
မင်္ဂလာတစ်နာရီ: ဟုတ်ကဲ့။ ခရမ်းရောင် Woodinville မှာ6နာရီအထိ - နေ့စဉ်3- ခရမ်းရောင် Bellevue နှင့်မွန်ပြည်နယ်-Fri3ရက်6နာရီ။
12254ကြိမ်မြောက်ရိပ်သာလမ်း, ဆီယက်တဲလ်
ရိပ်သာလမ်း NE, Bellevue ကြိမ်မြောက် 430 106
4459 Woodinville Redmond လမ်းမကြီး NE, Woodinville
06 ၏ 03
POCO ဝိုင် & ဝိညာဉ်
POCO ရငျးနှီးသညျ့နီးကပ်နှင့်ပျူငှါနွေးထွေးသောလေထုနှင့်ဖိတျဘို့ရည်ရွယ်သည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့အုပ်စုတစ်စုများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတော့မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာရဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်ရပ်ကွက်အတွင်းစပျစ်ရည်ကိုဘားနှင့်စားသောက်ဆိုင်က၎င်း၏စိတ်ကူးတစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်အသွင်ရှိပြီးသေးငယ်တဲ့ထမင်းစားခန်းအဖြစ်တစ်ဦးပြင်ပဟင်းလင်းပြင်အာကာသနှင့်အတူအသီးအသီးပူနွေးလအတွင်းနှစ်ခုပုံပြင်များ, ပါရှိပါတယ်။ ပျော်ရွှင်နာရီကာလအတွင်းအလွန်ကြီးစွာသောအပေးအယူအတူ POCO များသောအားဖြင့်တစ်ဦးဘီယာ, စပျစ်ရည်နှင့် / သို့မဟုတ်ကော့တေးအထူးရှိပါတယ်။
မင်္ဂလာတစ်နာရီ: ဟုတ်ကဲ့။ 6:30 pm တွင် 10 ညနေ-သန်းခေါင်တနင်္ဂနွေ-ကြာသပတေးနေ့သည်အထိနေ့စဉ်။
တည်နေရာ: 1408 E ကိုထင်းရူးလမ်း
06 ၏ 04
Jameson က Fink
Bottlehouse အနောက်မြောက်မှများစွာသောအရာ၏အရသာကို, ဖန်လေယာဉ်သို့မဟုတ်ပုလင်းများကဝိုင်, အဖြစ်အနောက်မြောက် microbrews ပေးထားပါတယ်။ စပျစ်ရည်ကိုဘားတစ်စပျစ်သီးကို chic အယူခံအဖြစ်တစ်ဦးပြင်ပဟင်းလင်းပြင်ရှိပါတယ်။ မီနူးမှုပညာရှငျနှငျ့ဒိန်ခဲ, အသားနှင့်မုန့်တစ်ရွေးချယ်ရေးပါရှိပါတယ်။
မင်္ဂလာတစ်နာရီ: ဟုတ်ကဲ့။ Daily သတင်းစာ3-6ညနေ
တည်နေရာ: 1416 34 ကြိမ်မြောက်ရိပ်သာလမ်း
06 ၏ 05
RN74 အနည်းငယ်ပိုဥရောပဆီယက်တဲလ်အတွက်အခြားစပျစ်ရည်ကိုဘားအများစုထက်ဖြစ်ပါတယ်။ စပျစ်ရည်ကို-by-The-ဖန်စာရင်းအနောက်မြောက်နှင့်အခြားကမ္ဘာကစပျစ်ရည်ကိုတိုင်းဒေသကြီးများအနေဖြင့်ရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပြင်သစ်ဝိုင်အပေါ်အနည်းငယ်အလေးပေးအတူ။ အလားတူပင်မီနူးပြင်သစ်အစားအစာဆီသို့တစ်ဦး slant နှင့်အတူများစွာသောလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူအရသာ intriguing သိရသည်။ တစ်ဦးကပျော်စရာလှည့်ကွက်ရရှိနိုင်ဝိုင်စာရင်းပြုစုသောမြို့ရိုးပေါ်မှာရထားဘူတာရုံ-စတိုင်စာဖတ်သူကိုဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာတစ်နာရီ: ဟုတ်ကဲ့။3နာရီ / Tues-Thurs / Sat 4-6 ညနေ 3-7 နာရီ / Fri 3-6 နာရီပိတ်ဖို့ရန် - မွန်
တည်နေရာ: 14334ကြိမ်မြောက်ရိပ်သာလမ်း
06 ၏ 06
Phoenecia တစ်ဦးအမြင်နှင့်အတူတစ်ဦးသည်စပျစ်ရည်ဘားနှင့်စားသောက်ဆိုင်, ဆီယက်တဲလ်ရဲ့စပျစ်ရည်ကိုဘားတို့တွင်အတစ်ရှားပါးသည်။ အိုလံပစ်ကျော်ထွက်မကြည့်ပါနဲ့ညာဘက် Alki သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင်တည်နေရာကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းရက်ပေါင်းအပေါ်နေဝင်ချိန်ကြည့်ပါ။ မီနူးလွန်း, အသေးစားကိုက်အများကြီးလည်းပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်း full-size entrees နှင့်အရသာရှိတဲ့ပီဇာမီနူး။ အထူးဆုကြေးငွေမီနူးလည်းသက်သတ်လွတ်ပစ္စည်းများနှင့်အနည်းငယ်သက်သတ်လွတ်ပစ္စည်းများကိုအများအပြားရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
တည်နေရာ: 2716 Alki ရိပ်သာလမ်း SW
Kristin Kendle တည်းဖြတ်။
ဆီယက်တဲလ်အတွက်ထိပ်တန်း 10 အမြင့်ဆုံးမိုးပျံအဆောက်အဦး
အဘယ်အရာကိုဆီယက်တဲလ်အတွက်သတိရအောက်မေ့နေ့ Weekend အပေါ်လုပ်ဖို့
မြစီးတီး ComiCon: အဆိုပါအပြီးအစီးလမ်းညွှန်
Glass ကို၏တံတား - Tacoma ရဲ့အအေးဆုံး Landmark Exploring
PNB ၏ The Nutcracker - Go မှထိပ်တန်း 10 အကြောင်းရင်းများ
Cancun6အကောင်းဆုံးမိသားစု-Friendly Resorts
နိုင်ငံတော်ပန်းခြံဂျော့ဘ်နှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများ - ဖလော်ရီဒါ
ဘရွတ်ကလင်းရဲ့ Wyckoff အိမ်နယူးယောက်စီးတီးရှိရှေးအကျဆုံးမူလစာမျက်နှာဖြစ်ပါသည်
Key ကိုအနောက်ဖလော်ရီဒါအတွက် CASA Marina ဟိုတယ်၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဖျော်ဖြေပွဲ-Goers များအတွက် KeyArena နှင့်သိကောင်းစရာများအကြောင်းကိုအချက်အလက်
ဒီနွေဦးတိုရွန်တိုအတွက်သလား9အခမဲ့အရာ
ကင်မရွန်ကျေးရွာ, Raleigh, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားအတွက်စာဆိုင်များ
ဗြိတိသျှဆန္ဒခံယူပွဲမဲတစ်ခရီးသွားအိပ်မက်ဆိုး Create ကြမည်နည်း
ဧပြီ, မေလနှင့်ဇွန်လအတွင်းစိန့်လူးဝစ် '' အကောင်းဆုံးနှစ်ပတ်လည်ပွဲများ